Zvinokonzera uye mhedzisiro yekusviba kweruzha | Green Renewables
Nhasi zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevagari venyika vanogara mumaguta makuru. Maguta ave mune masosi eruzha rukuru kuburitsa uye acoustic kusvibiswa. Kunonyanya kukonzera ruzha mumaguta kufamba mumugwagwa. Iko kusunganidzwa kwemotokari, traffic, kuwandisa kwemotokari, nyanga, nezvimwe. Dzinoburitsa ruzha uye dzinogona kukonzera zvirwere muvanhu.
World Health Organisation (WHO) inoisa muganhu wezuva remasecibel makumi matanhatu neshanu (dB) kuitira kuti irege kukuvadza hutano. Asi mamirioni avanhu akafumurwa kumatunhu akakwirira zuva rega rega. Chii chingaitwe mumamiriro ezvinhu aya uye ndedzipi njodzi dzekuenderera mberi nekuratidzwa kune yakakwira ruzha mazinga?
1 Hunhu hwekusviba kweruzha
2 Ruzha mumaguta
2.2 Zvinetso zvemwoyo
2.3 Kunzwa matambudziko
3 Ruzha kusvibiswa kunogadzira vanhu vazhinji vanorwara
4 Ruzha uye nhanho dzehutano
5 Ruzha rwezvakasikwa
6 Maitiro ekudzivirira kusvibiswa kweruzha mumaguta
Hunhu hwekusviba kweruzha
Ruzha kusvibiswa kune zvakasarudzika hunhu hunosiyanisa kubva kune zvimwe zvinosvibisa:
Ndiyo yakashatisa kusvibisa kugadzira uye inoda simba shoma shoma kuti ibudiswe.
Izvo zvakaoma kuyera uye kuyera.
Iyo haina kusiya zvisaririra, haina mhedzisiro inokanganisa nharaunda, asi inogona kuve necumulative mhedzisiro pamhedzisiro yayo pamunhu.
Iyo ine nharaunda yekuita idiki zvakanyanya kupfuura zvimwe zvinosvibisa, ndiko kuti, iri munzvimbo dzakatarwa.
Iyo haifambi kuburikidza neyakajairwa masisitimu, semhepo-inopepereswa nemhepo yakasvibiswa mweya, semuenzaniso.
Izvo zvinonzwisiswa chete nepfungwa imwechete: kunzwa, izvo zvinoita kuti maitiro ayo arerukirwe. Izvi hazvisi izvo zvinoitika nemvura, semuenzaniso, uko kusvibiswa kunogona kuonekwa nechitarisiko chayo, kunhuwa uye kuravira.
Ruzha uye nyanzvi yekusvibisa ruzha Ndivo vanoyera ruzha mumatunhu uye vanogadzira mamapu eruzha. Ivo vanogadzira ruzha mazinga anowanikwa munzvimbo yega yega yemaguta uye chikamu chechikumbaridzo mukati mehusiku uye husiku izvo zvinofanirwa kuve nekuwana hutano hwakanaka.
Ruzha zvikumbaridzo zvakakwirira mukati mezuva kupfuura husiku. Kuenderera mberi nekuratidzwa kune yakakwira ruzha nhanho kunogona kukonzera kurwara kana matambudziko senge kushushikana, kushushikana, kuoneka kwematambudziko emoyo Uye kunyangwe muvana, matambudziko anogona kuoneka avasina kusimba mukufunda kwavo.
Kune zvekare mamwe matambudziko ane hukama nemazinga eruzha akadai se:
Munzvimbo dziri mumaguta ane hupenyu hwepamusoro hwehusiku senge mabhawa, nzvimbo dzekudyira, disco, mhomho, nezvimwe. Ivo vanowanzo kuve neakakwira ruzha mazinga pakati pehusiku. Izvi zvinokonzeresa kunetseka kurara muvanhu vanogara munzvimbo dzakapoteredza.. Kuenderera mberi kwekunetseka pakurara uye maawa mashoma ekurara kunokonzera kushaya hope. Uye zvakare, kushaya hope kunowedzera kutaridzika kwepfungwa kushushikana kana kushushikana; pamwe nekushandurwa kwema immune system, kukanganwa uye matambudziko ekudzidza.
Kune zvidzidzo zvinoratidza kuti munzvimbo dzine mazinga epamusoro e ruzha rwakawedzera kupinda muchipatara.
Iyo yakakwira mwero wekuratidzira ruzha rwakakurudzirwa neWHO ndeye 65dB masikati. Kusingaperi kwemazuva ese kufumurwa kune ruzha mazinga ari pamusoro pe65 dB kana kuomarara kubuda pamusoro pe80-85 dB zvinogona kukonzera kusagadzikana kwenguva refu kwemoyo, kunyangwe kana avo vakakanganiswa vasingaone zviratidzo zvechirwere. Vaya vanokanganiswa havazvizive sezvo muviri uchipindura ruzha rwakanyanya nekumisikidza mahormone etsinga anowedzera kuwedzerwa kweropa, kurova kwemoyo, vasoconstriction uye kuomesa ropa.
Zviripachena, vanhu vakura vanonyanya kunetseka uye vari panjodzi yerudzi urwu rwehurwere nekuda kwekugara vachiona ruzha rukuru.
Vanhu vanowanzo shanda kana nzvimbo dzekuzorora dzine ruzha rwakanyanya vanowanzo tenderera kukuvara kwekunzwa. Uku kukuvara kunoparadza masero munzeve yemukati uye kukuvadza kunzwa.
Kunzwa kurasikirwa kunounza mhedzisiro inokanganisa hupenyu hwedu hwezuva nezuva, inokanganisa hukama hwemagariro, kudzikira kwedzidzo uye kushanda kwebasa, kunokonzera kunzwa kwekusurukirwa, kusurukirwa uye kushushikana
Kuti udzivise izvi zvinokurudzirwa:
Dzivisa nzvimbo dzine ruzha
Dzivirira nzeve dzako nevadziviriri vakakodzera
Terevhizheni neredhiyo yakavhurwa nevhoriyamu ine mwero
Paunenge uchishandisa mahedhifoni, usapfuure 60% yehuwandu hwehuwandu
Usapfuure kushandiswa kwavo kweinopfuura awa rimwe pazuva
Shandisa zvishandiso zvine vhoriyamu limiter kuti usapfuure nhanho dzine hutano
Paunenge uchityaira, usashandise runyanga zvisina basa
Munguva yezviitiko zvemimhanzi gara kure nevatauri
Ruzha kusvibiswa kunogadzira vanhu vazhinji vanorwara
Kuenzanisa uye kuenzanisa kuoma kwekusviba kweruzha, ongororo yakaitwa kuBarcelona Institute for Global Health (ISGlobal), nzvimbo inokurudzirwa ne "la Caixa" Banking Foundation, iyo yakafungidzira, kekutanga, mutoro we chirwere chinokonzerwa nemaguta uye kuronga kwekufambisa muBarcelona.
Pakati pezvinhu zvese zvezvakatipoteredza zvinogona kukonzera zvirwere muvagari, irwo ruzha kubva kumatraffic rwunokonzera huwandu hwakawanda, yakatokura kupfuura zvirwere zvine chekuita nekushomeka kwekurovedza muviri uye kusvibiswa nemhepo
Ichi chidzidzo chakasvikawo pamhedziso yekuti dai Barcelona yanga iine kuronga kuri nani kwenzvimbo dzemadhorobha uye zvekufambisa inogona kudzosera kumashure kusvika kuzviuru zvitatu zvekufa pagore. Uye zvakare, kana kurudziro yepasi rose yekusimudzira chiitiko chemuviri yainge yasangana, zvichidzivirira kusvibiswa nemhepo, ruzha uye kupisa, 1.700 zviitiko zvehosha yemwoyo zvinogona kudzivirirwa gore rega rega, zvinopfuura 1.300 zviitiko zvehypertension, padyo nemazana masere mazana masere Kurohwa uye mazana manomwe nemakumi mana emakesi ekushushikana, pakati pevamwe.
Ruzha kusvibiswa kunokonzera zvimwe zvirwere kupfuura kusvibiswa kwemhepo
Ruzha uye nhanho dzehutano
Chiyero cheruzha chakayerwa mumadecibel maererano nenzeve yemunhu ndeichi:
0 Chikamu chidiki chekunzwa
10-30 Ruzha ruzha danho rakaenzana neakaderera kutaurirana
30-50 Ruzha ruzha danho rakaenzana neyakajairwa hurukuro
55 Acoustic nyaradzo yezinga paavhareji
65 Maximum inobvumidzwa mwero weacoustic shiviriro yakatangwa neWHO
65- 75 Ruzha runotsamwisa rakaenzana nemugwagwa une traffic, terevhizheni yakakwira ...
75-100 Nzeve kukuvara kunotanga, zvichikonzera kusagadzikana kwekunzwa uye kutya
100-120 Ngozi yekusanzwa
120 Acoustic pain chikumbaridzo
140 Chiyero chakakwirira icho nzeve yemunhu inogona kumira
Nekushatirwa kweruzha, nharaunda dzemadhorobha uye netsiva dzakakwirira tiri kukanganwa ruzha rwezvakasikwa. Vanhu vazhinji, kunyangwe kukwira makwikwi, vanopfeka mahedhifoni uye vanoteerera mimhanzi pachinzvimbo chekunakidzwa neruzha rwezvakasikwa.
Chipo chiri kurira kweshiri kana icho chemvura chinowira patsime chiri kurasika nekuda kwemaitiro ari kuita senge rudzi rwehumatsi. Runyararo rwemakwaya epanyika rwuri munjodzi yekunyangarika nekurasikirwa nekukosha kuchizvarwa chiripo, sevanhu vasingateerere ruzha rwakavakomberedza.
Ruzha rwekunze mazinga ari kuwedzera mune dzimwe nzvimbo anotyisidzira vanhu kuti vasazive mamwe manzwi senge rwiyo rwecanary, mvura inodonha kana rustle yemashizha emiti kana paine mhepo, iyo inogona kunzwika nguva nenguva kunyangwe munzvimbo dzakasvibira dzemadhorobha.
Izvo hazvisati zvazivikanwa zvechokwadi nei, asi kune zvidzidzo zvinotsigira kuti kuteerera kurira kunoitwa nezvakasikwa inobatsira hutano. Dzikamisa pfungwa, zorora mhasuru, dzivisa kusagadzikana, nezvimwe. Izvi zvinogona kunge zviri nekuti munhu ari mumamirioni emakore emakore ekushanduka-shanduka akabatanidza runyararo runyararo rwezvakasikwa nekuchengeteka.
Maitiro ekudzivirira kusvibiswa kweruzha mumaguta
Sezvo traffic yemumugwagwa iri sosi huru kwazvo, tinofanirwa kutarisa kudzikamisa. Kune zvivakwa zvakavakirwa mumigwagwa mikuru inopfuura padyo nedzimba kana idzo dziri mumadhorobha (ivo vanopfuura nepakati peguta) kudzivirira ruzha rwakanyanya.
Semuenzaniso, tinowana ruzha screens. Aya ndiwo madziro akavakwa kumucheto kwemigwagwa mikuru yekudzikisa huwandu hweruzha runopfuura napo. Munharaunda dzemaguta dzinogona zvakare kuve miti nemakwenzi izvo, kunze kwekudzikisa ruzha, zvinonatsa mweya wakasviba.
Kune mapurojekiti ekutora mukana wesimba rinowedzerwazve uye kudzivirira ruzha urikugadzirwa. Icho chiri pamusoro pematenga edenga ezuva pamigwagwa. Fukidza migwagwa, migwagwa mikuru uye njanji nemagetsi ezuva anovhara yatove sarudzo pamwe nekushamisa kwekumisikidza mukushanda, senge yechitima-kumhanya njanji njanji muBelgium.
Kunetsa kunokonzerwa nezuva mambakwedza nemadekwana kwaizonyanya kudzivirirwa, pamwe nekupisa kweinjini munzvimbo dzekupenga kwakanyanya senge magwenga nenyika dzinodziya uye inoderedza zvakanyanya ruzha runoburitswa mumaguta. Pamusoro pezvo, isu tine mupiro wesimba uyo izvi zvinosanganisira, zvichibva kunzvimbo inovandudzwa, isinga svibise uye inoshanda.
Sezvauri kuona, ruzha haruonekwe kune ziso remunhu, asi mhedzisiro yacho yakakomba. Naizvozvo, isu tinofanirwa kuita chikamu chedu kudzivirira ruzha rwakanyanya uye kusava nematambudziko ehutano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Ruzha kusvibiswa
kevin carruitero akadaro
Mune yangu kesi ini ndaiwanzo teerera kumimhanzi ine mahedhifoni kwemaawa pahoriyamu yakanyanyisa uye zvechokwadi ndaive nekushushikana kwakawanda uye kunyanya kunetseka.
Kutenda nemupiro, kwaziso kubva kuPeru!
Pindura kuna kevin Carruitero
Madrid inotora hurongwa hwekuvandudza mhando yemhepo
Simba rematavi eBankia achange ari 100% anovandudzwa